आज माघ ६ सोमबारको राशिफल – तपाईको भाग्य कस्तो रहनेछ ? हेर्नुहोस् – Hamrosandesh.com
आज माघ ६ सोमबारको राशिफल – तपाईको भाग्य कस्तो रहनेछ ? हेर्नुहोस्
तपाई आफ्नै कारणले घर परिवारमा तथा पति पत्नि बिच मनमुटाब बढ्नेछ । ऋण,रोग तथा संकटको सामाना गर्नुपर्नेछ । खोज तथा अनुशन्धानको क्षेत्रमा अलि बढि संघर्ष गरे नतिजा आफ्नो पोल्टोमा पार्न सकिनेछ । फलाम तथा फलामसँग सम्बन्धित काम गर्दा ध्यान दिनु जरुरि देखिन्छ ।